Falcelinta ka dhalatay warbixinta ka hadleysa "xiriir ka dhexeyn kara Alshabaab iyo Qatar" - BBC News Somali
Falcelinta ka dhalatay warbixinta ka hadleysa "xiriir ka dhexeyn kara Alshabaab iyo Qatar"
Lahaanshaha sawirka Feisal Omar/Reuters
Image caption Dekadda Boosaaso ee Somalia
Wargayska The New York Times ayaa qoray faallo ku saabsan in Qatar iyo Imaaraadka Carabta labadi sano ee u dambeeysay ay Soomaaliya u "isticmaalayeen meel ay ku dagaallamaan oo qolaba ay hubeyso koox iyada raacsan oo danaheeda ka shaqaysa".
Wargayska NYT ayaa sheegay inuu hayo "cod telefoonka lagu duubay" oo ah wadahadal dhex maray safiirka Qatar ee Soomaaliya iyo ganacsade aad ugu dhow amiirka Qatar oo sheegay in "koox mintidiin ah ay qaadeen weerar Boosaaso ka dhacay" oo ay sheegteen kooxda daacish, si ay u meel mariyaan danaha Qatar oo ah in ay "meesha ka saaraan waddanka uu xifaaltanka uu kala dhaxeeyo ee Iimaaradka Carabta".
"Qaraxa iyo dilka waan garanaynaa cidda ka dambaysa" ayuu yiri Khaliifa Kayed Al Muhanadi mar uu telefoonka ku hadlayey 18-kii May, todobaad kaddib weerarkaas.
Wargayska oo sheegay inuu toos u soo xigtay Muhanadi oo sheegay, "xasaradda ayaa looga gol lahaa in Dubai meesha looga eryo", isagoo ula jeeday xarunta dhaqaalaha ee Imaaraadka. "Ha eryeen qolyaha Imaaraatka, si aysan ugu cusboonaysiin heshiisyada, waxaanan heshiisyada keeni doonnaa halkan Dooxa," ayuu yiri Muhanadi sida uu qoray wargeyska The New York Times.
Ma jiro ilo madaxbannaan oo xaqiijinaya in uu sax yahay warkan uu baahiyay wargeyska afka dheer ee Mareykanka laga leeyahay. Balse, khilaafka ka dhexeeya dalalka Khaliijka ayaa saameeyay wadammada geeska Afrika.
Image caption Ciidamada Soomaaliya uu Imaaraadka tababaray
"Soomaaliya waxay u muuqataa tusaalaha ugu wanaagsan ee loo soo qaadan karo dagaalka ka dhaxeeya waddamada Khaliijka, xasilooni darrada uu ka abuuray," ayuu yiri Zach Vertin oo ah khabiir ka tirsan machadka Brooking horayna u ahaa Dibloomaasi dowladda Mareykanka.
"Saaxiibadeen ayaa ka dambeeyey qaraxii u dambeeyey," ayuu yiri Mr Muhanadi oo arrinta u xaqiijinaya safiirka, sida ku qoran Wargeyska NYT.
Wargayska wuxuu sheegayaa in ninkaas uu saaxib dhow la yahay amiirka Qatar, Sheekh Tamim bin xamad Al Thani, wuxuuna sheegayaa in ay jiraan sawirro ah labadooda sida laga soo xigtay warbixinno iyo sawirro laga helay ilo sirdoon. Wargaysku wuxuu intaa ku daray "in aalaaba ninkaasi uu la safro amiirka".
Wargaysku wuxuu sheegayaa in "haddii taasi ay sax tahay ay noqoneyso caddayn cusub oo uusan mugdi ku jirin oo muujinaysa xajmiga uu leeyahay loollanka u dhaxeeya dalalka gacanka".
Dowladda Soomaaliya ayaa dagaalka qaboow ee ka dhex billowday waddamada Khaliijka ka noqotay dhexdhexaad.
Soomaaliya ayaa garoonka Muqdisho, sannadkii la soo dhaafay ku qabatay $9.6 milyan o doolar uu Imaaraadka lahaa. Saraakiisha Imaaradkana waxay lacagtaasi ku sheegeen iney ahayd mid lagu bixinayay mushaaraadka ciidamada iyo Booliska Soomaliya.
Halka Soomaaliyana lacagtaasi ay ku sheegtay mid looga tala galay in lagu cadaadiyo dowladda ama "gudaha waddanka Soomaaliya xasilooni darro lagaga abuurayo".
Xilligaa wixii ka dambeeyay Imaaraadka wuxuu xiriirka u jaray dowladda Soomaaliya, waxayna yareeyeen howlihii ay ka hayeen Soomaaliya.
Image caption Hay'ad smafal oo Qatar laga leeyahay oo Soomaaliya raashiin gargaar ah ka bixineyso
Dowladda Qatar jawaabta ay ka bixisay warka lagu qoray wargeyska NYT
Xafiiska Isgaarsiinta dowladda Qatar ayaa soo saaray hadal qoraal ah oo uu kaga jawaabayo eedda wargeyska New York Times lagu daabacay 9-ka July ee sannadkan.
Dawladda Qatar ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar iney ku dhisan tahay xasiloonii iyo horumar iney abuurto oo aysan faragelinin arrimaha gudaha ee dalalka madaxa bannaan.
"Ciddii sidaas samaynaysana ma aha cid matalaysa xukuumaddeena," ayaa lagu yiri hadalkaas qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee dawladda Qatar.
Hadalka Dawladda Qatar ay soo saartay waxay ku sheegtay in Khaliifa Al Muhanadi uusan iminka ahayn horena u ahayn la taliye la shaqeeya xukuumadda Qatar.
Waxaa lagu yiri qoraalka "ma matalo dawladda Qatar, xaqna uma laha inuu ku hadlo magaca xukuumadda. Baaritaan ayaan ku samayn doonnaa shaqsigan waxaana loo qaban doonaa mas'uuliyadda hadalladiisa".
"Soomaaliya waa saaxib muhiim u ah Qatar, balse xukumadda Qatar ma farageliso arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Xiriirka aan Soomaaliya la leennahay wuxuu ku saleeysan yahay ixtiraam iyo inaan iska kaashanno danaha labada dal oo waxtar u leh labada dowladood iyo shacabkooda", ayaa ku xusan warka.
Xafiiska Isgarsiinta Qatar wuxuu wargeyska ka codsaday inuu la wadaago codka caddeeynta uu sheegay si ay xukumadda Qatar baaritaan iyo dabagal dheerad ah ugu sameeyso arrintaasi.
Hase ahaatee wargeyska NYT wuu diiday codsiga dowladda Qatar inuu ka jawaabo iyaga oo ka duulayo sharciga warqeysgaasi u yaalla.
Lahaanshaha sawirka SACIID DANI
Image caption Madaxweynaha Puntland Siciid C/laahi Dani
Puntland maxay katiri?
Wuxuuna Yiri: "Waxaan doonayaa inaan dowladda federaalka ka codsado waxa wargeyska The New York Times lagu qoray maqaal waxyaabo badan ka hadlaya oo ay u badan tahay iney heleen caddeymo cad oo warbixintaasi ay uga duulaan."
"Wargeyska New York Times waa wargeys caan ah oo aad u weyn, dad badanna ay ku taxan yihiin. Warbixinnada ay qoraana waa lagu kalsoonaan karaa; waxay qoreen weerarki qaraxa ee ka dhacay Afaafka hore ee Maxakamada Boosaso iyo dilki Madaxii DP World loo geystay," ayuu yiri madaxweyne Deni.
Shaqa joojin laga sameeyay dekadda Berbera
Madaxweynaha Puntland oo maanta ka hadlay Garowe ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday "iney baaritaan dhab ah ku sameyso" Qoraalka uu daabacay wargeyska NYT, isagoo intaas raaciyay iney "tani abuurtay tuhun ay horay u qabeen dad badan oo ah in meelo ka baxsan dalka laga soo abaabulo falal lid ku ah xasilooni darada Puntland iyo guud ahaan Soomaliya".
Dowladda Soomaaliya ayaa weli ka hadlin warbixinta uu qoray wargeyska The New York Times iyo falcelinta ka dhalatay intaba.
Dalalkii Qatar go'doomiyey oo soo debcay
19 Luulyo 2017